အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား (၀ါကျ အဆင့်) - Myanmar Network
Posted by Kyaw Win Tun on May 4, 2012 at 11:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာလျင် ကျွမ်းကျင်၏။ ယနေ့အင်တာ နက်ခေတ် တွင်မူ အီးမေးလ်အသုံးပြုသူတိုင်း ရေးဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် ပေး စာမှအပ အခြား စာအမျိုးအစားများကိုမူ အထူးတလည် ရေးဖြစ်လေ့မရှိကြပါ။ အခြေခံပညာတန်းတွင်မြန်မာ စာနှင့် စာစီစာကုံးများ၊ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် စာစီစာကုံးများ ရေးခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ကျက်ခဲ့ ကူးခဲ့သည်သာများ၍အခြေခံသဘောကို မပိုင်ခဲ့ဟုဆိုရပါမည်။ အင်္ဂလ်ိပ်စာနှင့် ပတ်သက်၍ IELTS TOEFL စာမေးပွဲဖြေမည်ဆိုမှသာလျင် အရေးကို အပူ တ ပြင်း လေ့ကျငြ့်ဖစ်ကြပါသည်။ ၀ါကျ အဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားသဘောနှင့်ပတ်သက်၍ ဤဆောင်းပါး တွင်ပြောပါမည်။
ပထမဆုံး မြန်မာစာဝါကျနှင့် အင်္ဂလိပ်စာဝါကျတို့ ၏ ကွာခြားချက်ကို သိပြီး မြန်မာ စာကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်
စာေ ကြာင်း သို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရေးသားသည့် အဆင့်ကို ကျော် အောင် လေ့ ကျင့်ရပါမည်။ ဥပမာ “မည်သည့် ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာလျင် ကျွမ်း ကျင်၏။” ဆိုသော ၀ါကျကို အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ကြည့်ပါ။ In any language, ……..? (ဆက်မဖတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် အရင်ပြန်ရေးကြည့်ပါ။)
မြန်မာစာဝါကျကို ကတ္တားမပါပဲရေးနိုင်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာဝါကျတွင် အမြဲလိုလို subject ဟုခေါ်သော ပြုလုပ်သူ ကတ္တားပါရပါသည်။ ယခု လေ့ကျင့်မည့် “မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လ့ ကျင့် မှ သာလျင် ကျွမ်းကျင်၏။” ဆိုသော ၀ါကျတွင် ကတ္တားရှာကြည့်ပါ။သို့ ဆိုလျင် ထိုသဘောမျိုး ပေါက်ရန် ဘယ်လို အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေးမည်နည်း။ ဘယ်စကားလုံး များကို subject အဖြစ်သုံးနိုင်လဲ စတင်စဉ်းစားရပါမည်။ Noun Pronoun များကို သာ subject နေရာအတွက် သုံးနိုင်သည် ဟု သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ One, everyone, anyone, nobody, စသည့် နာမ်စား များကို မည်သူမဆို ဆို သည့် သဘောဖြင့် သုံးနိုင်ပါသည်။
ထို့ နောက် ကြိယာ verb ကိုစဉ်းစားပါမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ၀ါကျတွင် ကြိယာသည် ကတ္တားပြီလျင် အရေးအကြီး
ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ခု ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲဆိုသည်ကိုလည်း ၀ါကျတိုင်းအတွက် အမြဲစဉ်းစားရပါ မည်။ အထက်ဖော်ပြပါစာကြောင်းအတွက် subject နှင့် verb ကို ဆက်လိုက်လျင် “ဘယ်သူမဆို ကျွမ်းကျင်၏” One is skillful. ဟုဆိုနိုင်ပါမည်။ထို့ နောက် ကြိယာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် အချက်များကို ထပ်ထည့်မည်ကို စဉ်းစား ရပါမည်။
ဖော်ပြပါစာကြောင်းအတွက် ဘာကို ကျွမ်းကျင်တာလဲ၊ ဘယ်အခါမှာကျွမ်းကျင်သလဲ ဆိုသည် ကိုဆက် စဉ်းစား ရပါမည်။ One is skillful in?? အရေးကိုကျွမ်းကျင်သည်။ မူရင်း subject verb (အဓိက၀ါကျ) နှင့် ပြန် ဆက်ပါမည်။ One is skillful in writing. ဘယ်အခါမှာ ကျွမ်ကျင်သလဲ ။ “တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာ” ။ “ only when practice the skill”. ဤနေရာတွင်လည်း subject လိုလာပြန်ပါပြီ။ ထို့ ကြောင့် “only when one practices the skill”. မူရင်း ၀ါကျနှင့် ပြန်ဆက်ပါမည်။ “One is skillful in writing only when one practices the skill.” နောက်ဆုံး “ဘယ်ဘာသာစကားတွင်မဆို” ကို ထပ်ထည့်ပါမည်။ “in any language”။ ထိုအခါ ဤ၀ါကျကို ရပါမည်။ “In any language one is skillful in writing only when one practices the skill”.
မြန်မာစာကြောင်းကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရေး၍မရ ဆိုသည်မှာ မြင်သာလောက်ပြီထင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ၀ါကျ အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အဆင့်များကို ပြန်ပြောပါမည်။ subject ကိုစဉ်းစားမည်။ ထို့ နောက် verb၊ပြီး ထို ကြိ ယာနှင့်ပတ်သက်သော ဘခြောက်လုံးဟုဆိုနိုင်သည့် wh- မေးခွန်းများကို ဆက်စဉ်းစားပါမည်။ အချုပ်ဆိုလျင် အခြေခံ ၀ါကျ တည်ဆောက်ပုံများကို ကျွမ်းကျင်ထားရမည်။ ဝေါဟာရကြွယ်ဝရမည်။ (အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါအခြေခံ စာ အုပ် များတွင် ၀ါကျ ပုံစံ လေ့ကျင့် ခန်းများ ပါတတ် ပါသည်။ ၎င်း ပုံစံများကို စာဖတ်လျင်လည်း အချိန်သပ်သပ်ပေး ၍သ တိ ထားကြည့်နိုင်ပါသည်။)
ရေးထားသည့် စာကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ကြပါမည်။ “In any language one is skillful in writing only when one practices the skill”. ၀ါကျ grammar မှန်ပြီ။ သို့ သော် one နှစ်ခါထပ်ပါနေသည်။ တစ်လုံးတည်းသုံးမည်။ ၀ါကျပုံစံပြောင်းသွားပါသည်။ “In any language one is skillful in writing only with practice.” Verb to be ကြိယာထက် အခြား verb များက ပို ကောင်းသည်ဟု ယေဘူယျ ဥပဒေသ ရှိသည်။ ထို့ ကြောင့် have ကိုသုံးကြည့်မည်။ In any language one has good writing skill only with practice. ဖြစ်နိုင်သည့် သဘောကိုဆိုလိုသောကြောင့် ကြိယာ have ကို can ကူပေး လျင်ပို ကောင်း ပါမည်။ In any language one can have good writing skill only with practice.လေ့ကျင့်မှုလိုသည်ဆိုသည့် အချက်ကို အထူးပြုပြောလိုသည်။ Any နှစ်လုံးပါနေသေးသည်။ စာရေးခြင်းသည် ဘာသာစကားနယ်အတွင်းသာ ဆိုလိုသည်ကို ဖတ်သူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မည်။ ထို့ ကြောင့် in any language ကိုဖြုတ်ပါမည်။ စာကြောင်းပုံစံပြောင်းပါမည်။ One cannot have good writing skill without any practice.
ယခု နောက်ဆုံးရေးသော အင်္ဂလိပ်စာ ၀ါကျရရန် သဒ္ဒါ အပြင် အခြားသော ၀ါကျအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးသ ဘော များကိုပါ သိရပါမည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့် အရေးသဘောအချို့ မှာ မိမိ အလေး အနက် ပြောလိုသည့် အချက်ကို ဘယ် လိုပြောသလဲ၊ စကားလုံး မဖောင်းပွအောင် ဘယ်လိုရေးသလဲ စသည့် အချက်များဖြစ်သည်။ မြန်မာစာနှင့် ကွာခြား သည့် အချက်များကိုသိထာလျင်လည်းကောင်းပါသည်။ ဥပမာ မြန်မာစာတွင် အထူးပြုလိုလျင် ဆင်တူသည့် စကား လုံး များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ပြသော် လည်း အင်္ဂလိပ်စာတွင်မူ စာကြောင်းပုံစံကို အမျိုးမျိုးပြောင်း၍ ရေး တတ် ကြသည်။
ထို အင်္ဂလိပ်စာ၏ အရေးအသားသဘောနှင့် ပြောလိုသည့်အရာကို လေးနက်စေရန် ၀ါကျပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ဘယ် လိုရေးသလဲဆိုသည်ကို စာများများဖတ်၍ များများရေးထားမှသာ ကျက် မိပါလိမ့်မည်။
Permalink Reply by 2zgqio0u35h2n on May 4, 2012 at 19:46
Permalink Reply by Zaw Win on May 7, 2012 at 16:48
I could learn writing skill from your post.
That is valuable for us.
Permalink Reply by NYI MYO THU on May 9, 2012 at 11:10
Permalink Reply by theinthansukyaw on May 13, 2012 at 22:29
Permalink Reply by အေးမြတ်နိုးလင်း on May 15, 2012 at 10:17
Permalink Reply by khinswemyint on May 16, 2012 at 11:42
Very thankfully my brother, keep in share for needed students who has no good opportunity in writing.
Permalink Reply by Thike Htun on June 8, 2012 at 15:03